GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
E NWERE otu nwoke aha ya bụ Kingsley. N’ụbọchị mbụ o mere ihe omume n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke, ọ malitere ịgụ Baịbụl ozugbo a kụtụrụ ya aka n’ubu. O ji nwayọọ na-akpọpụta okwu niile nke ọma. E nweghị nke ọ na-akpọtaghị. Ma, ọ naghị ele anya na Baịbụl. Maka gịnị?
Kingsley bi na Siri Lanka. O kpuru ìsì, bụrụ onye ntị ike, daakwa ngwọrọ. Olee otú nwoke a si mụta banyere Jehova? Oleekwa otú o si ruo eru ime ihe omume n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke? Ka m kọọrọ gị.
Mgbe mbụ m hụrụ Kingsley, obi tọrọ m ụtọ n’ihi otú o si chọsie ike ịmata eziokwu Baịbụl. Ya na ụfọdụ Ndịàmà Jehova amụọla Baịbụl. O nwere akwụkwọ bụ́ Ihe Ọmụma nke Na-eduba ná Ndụ Ebighị Ebi ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì, ma o meela ochie. * O kwetara ka m malite ịmụrụ ya ihe. Ma, e nwere ihe abụọ mere ka o sitụrụ anyị ike.
Nke mbụ bụ na Kingsley na ọtụtụ ndị ọzọ bi n’ebe a na-elekọta ndị agadi na ndị nwere nkwarụ. M na-eti mkpu ka o wee nụ ihe m na-ekwu n’ihi na ọ bụ onye ntị ike, mkpọtụ na-adịkwa n’ebe ahụ. N’eziokwu, onye ọ bụla nọ n’ebe ahụ na-anụ ihe anyị na-amụ kwa izu.
Nke abụọ bụ na ọ bụ naanị ihe ole na ole ka Kingsley ga-agụli ma ghọta ma anyị mụwa ihe. N’ihi ya, Kingsley na-akwado nke ọma. Tupu mụ abịa, ọ na-agụ ebe anyị ga-amụ ọtụtụ ugboro, jirikwa Baịbụl ndị ìsì ya gụọ amaokwu Baịbụl ndị dị ebe ahụ, chepụtakwa otú ọ ga-esi zaa ajụjụ niile dị ebe ahụ. Otú a o si akwado baara anyị ezigbo uru. Anyị mụwa ihe, ọ na-agwọrọ na rọg a tụrụ n’ala. Ọ na-eti aka ya n’ala ma tisie mkpu ike ma ọ kọwawa ihe ọ mụtara. Ka oge na-aga, anyị malitere ịmụ ihe ugboro abụọ n’izu. Ọmụmụ ihe nke ọ bụla na-ewekwa anyị awa abụọ.
ỊGA ỌMỤMỤ IHE NA ỊZA AJỤJỤ N’ỌMỤMỤ IHE
Ọ na-agụsi Kingsley ike ịga ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, ma ọ dịghị mfe. A ga-ekunye ya n’oche ndị ngwọrọ, kupụta ya, kuba ya n’ụgbọala, sikwa ebe ahụ kuba ya n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. N’ihi ya, ọtụtụ ụmụnna na-eke onwe ha eke inyere ya aka. Ha na-ewerekwa ya ka ihe ùgwù. A gaa ọmụmụ ihe, Kingsley na-edewe ígwè okwu n’akụkụ ntị ya, na-ege ntị nke ọma, na-azakwa ajụjụ.
Mgbe Kingsley mụrụ ihe ruo ọnwa ole na ole, o kpebiri idenye aha ya n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke. Mgbe ọ fọrọ izu abụọ ka o mee ihe omume mbụ ya, m jụrụ ya ma ọ̀ na-akwadokwa. Ya ejiri obi ike sị m, “Ee, Nwanna m, amụọla m ya ugboro iri atọ.” M jara ya mma maka mgbalị ya, sịzie ya gụọ ya ka m nụ. Ya emeghee Baịbụl ndị ìsì ya, tụkwasị ya aka, gụwa. Ma, m chọpụtara na ọ naghị atụ ihe ọ na-agụ aka otú ndị ìsì si eme. O burula ebe ahụ niile ọ ga-agụ n’isi.
Ihe ahụ tụrụ m n’anya, anya mmiri agbaa m. M jụrụ Kingsley otú o si nwee ike iburu ebe ahụ n’isi nke ọma ebe ọ bụ naanị ugboro iri atọ ka ọ mụrụ ya. Ya asị m: “Mba, m na-amụ ya ihe dị ka ugboro iri atọ kwa ụbọchị.” Kemgbe ihe karịrị otu ọnwa, Kingsley na-anọ na rọg na-amụ ihe omume ya, na-amụgharịkwa ya ruo mgbe o buuru ha niile n’isi.
Ụbọchị Kingsley ga-eme ihe omume ya n’Ụlọ Nzukọ Alaeze mechara ruo. Mgbe o mechara ya, ụmụnna niile kụrụ aka dara ụda, anya mmiri gbakwara ọtụtụ ndị n’ihi mbọ nwanna a gbara. Otu nwanna nwaanyị nke kwụsịburu ime ihe omume n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi n’ihi ụjọ gara gwa onye nlekọta ụlọ akwụkwọ ka o denyeghachi aha ya. N’ihi gịnị? Ọ sịrị: “Ebe ọ bụ na Kingsley mere ya, m ga-emeli ya.”
Kingsley mụrụ ihe ruo afọ atọ. N’abalị isii n’ọnwa Septemba afọ 2008, e mere ya baptizim. O ji obi ya niile fegide Jehova ruo mgbe ọ nwụrụ n’abalị iri na atọ n’ọnwa Mee afọ 2014. Obi siri Kingsley ike na ọ ga-ejere Jehova ozi na Paradaịs mgbe ọ ga-agbasi ike, ahụ́ adịkwa ya mma. (Aịza. 35:5, 6)—Akụkọ Paul McManus kọrọ.
^ para. 4 E bipụtara ya n’afọ 1995. Ma, a naghịzi ebipụta ya.